‘रअ’ प्रमुखलाई भेटेपछि प्रधानमन्त्रीको शुभकामना, निशान छापको नक्सामा लिम्पियाराधुरा गायब !
काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दसैँको शुभकामना सन्देश दिँदा प्रयोग भएको नेपालको निशानमा पुरानो नक्सा छापिएपछि सामाजिक संजालमा त्यसको आलोचना भइरहेको छ । प्रधामन्त्री ओलीले ट्वीटरमार्फत र्सावजनिक गरेको निशान छाप प्रयुक्त शुभकामना सन्देश जारी गरेका थिए ।
शुक्रबार फूलपातीको अवसरमा सार्वजनिक गर्नुभएको उक्त सन्देशसहितको तस्वीरमा सबैभन्दा माथि निशान छाप र तसमुनि सन्देश लेखिएको छ । त्यहाँ भनिएको छ, ‘२०७७ सालको बडा दशैंको उपलक्ष्यमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना !’ र दायाँ साइडमा नमस्ते गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको तस्वीर पनि छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नै नेपालको नयाँ नक्साको साटो पुरानो नक्सा प्रयोग गरेपछि त्यसबारे प्रश्न उठेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रश्न गरेका छन्, लिम्पियाधुरारहित नेपालको नक्सा प्रयोगलाई सामान्य त्रुटि कसरी मानौं सम्माननिय @PM_Nepal ? गम्भीर विमती दर्ज होस् ! देशको संसदले पारित गरेको नक्सा अब नक्सामै असुरक्षित भएपछि जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान जारी कि यहाँको नेतृत्वमा बिसर्जन ?